शीर्ष M गल्तीहरू मार्केटि Auto स्वचालनमा बेवास्ता गर्न Martech Zone
मङ्गलबार, डिसेम्बर 13, 2016 बुधबार, डिसेम्बर 14, 2016 एन्थोनी बर्ग
मार्केटिंग अटोमेसन एउटा अविश्वसनीय शक्तिशाली टेक्नोलोजी हो जसले व्यवसायलाई डिजिटल मार्केटिंग गर्ने तरिका परिवर्तन गरेको छ। दोहोरिने बिक्री र मार्केटिंग प्रक्रियाहरूलाई स्वचालित गरेर सम्बन्धित ओभरहेडहरू घटाउँदा यसले मार्केटिंग दक्षता बढाउँछ। सबै आकारका कम्पनीहरूले मार्केटि auto स्वचालनको फाइदा लिन सक्छन् र उनीहरूको नेतृत्व उत्पादन साथै ब्राण्ड निर्माण प्रयासहरूको सुपरचार्ज गर्न सक्दछन्।
धेरै %०% कम्पनीहरूले पहिले नै मार्केटि auto स्वचालन प्रयोग गरिरहेका छन्, र लगभग 70०% बाँकीले यसलाई अर्को -6-१२ महिनाहरूमा प्रयोग गर्ने योजना गर्दै छन्। यो ध्यान देने योग्य छ कि मार्केटिंग अटोमेसन प्रयोग गर्ने धेरै कम्पनीहरूले अपेक्षित परिणामहरू अनुभव गरेका छन्। तिनीहरू मध्ये धेरैले केहि सामान्य गल्तीहरू गर्दछन् जसले उनीहरूको मार्केटिंग अभियानलाई पछाडि सारेको छ। यदि तपाईं आफ्नो फर्मको लागि मार्केटिंग अटोमेसन प्रयोग गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, यी गल्तीहरू हटाउनुहोस् तपाईंको नयाँ मार्केटिंग टेक्नोलोजीसँग सफलताको संभावना बढाउन:
गलत मार्केटिंग स्वचालन प्लेटफार्म खरीद गर्दै
अन्य मार्केटिंग टेक्नोलोजी प्लेटफर्महरू जस्तै ईमेल मार्केटिंग वा सामाजिक मिडिया उपकरणहरूको विपरित, मार्केटि auto स्वचालनलाई सफ्टवेयरको करीव एकीकरण चाहिन्छ सामाजिक मिडिया खाताहरू, वेबसाइटहरू, अवस्थित सीआरएम र अन्य ट्र्याकि technologies टेक्नोलोजीहरूको साथ। सबै स्वचालन उपकरणहरू सुविधाहरू र अनुकूलताको आधारमा समान हुँदैनन्। धेरै कम्पनीहरूले सफ्टवेयर खरीद गर्दछन् मात्र यसको सम्भावित सुविधाहरू र सुविधाहरूको आधारमा। यदि नयाँ सफ्टवेयर तपाईंको अवस्थित प्रणालीहरूसँग उपयुक्त छैन भने, यो एक गडबडी सिर्जना गर्दछ जुन समाधान गर्न गाह्रो छ।
तपाईंको फर्मको लागि स्वचालन सफ्टवेयरलाई अंतिम रूप दिनु अघि विस्तृत अनुसन्धान र डेमो परीक्षण गर्नुहोस्। असंगत सफ्टवेयरले थोरै हासिल गर्नेछ, यसले के फाइदा र सुविधाहरू प्रदान गर्दछ।
तपाईंको ग्राहक डाटाको गुणस्तर
डाटा मार्केटिंग स्वचालनको मूल हो। डाटाको कमजोर गुणवत्ताले ध्वनि मार्केटिंग रणनीति र यसको कुशल कार्यान्वयनको पर्वाह नगरी खराब नतिजा उत्पन्न गर्दछ। लगभग २%% ईमेल ठेगानाहरू प्रत्येक वर्षको म्याद सकिन्छ। यसको मतलब, १०,००० ईमेल आईडहरूको डाटाबेस दुई वर्षको छोटो अवधिमा 10,000 5625२XNUMX सही आईडी मात्र हुनेछ। निष्क्रिय ईमेल आईडीहरूको बाउन्समा परिणाम हुन्छ जुन ईमेल सर्भरको प्रतिष्ठामा बाधा पुर्‍याउँछ।
डाटाबेस सफा गर्न समय-समयमा सफा गर्न तपाईंले एउटा संयन्त्र राख्नु पर्छ। यस्तो संयन्त्रको अभावमा, तपाईं मार्केटिंग अटोमेसनमा लगानीमा फिर्ताको औचित्य प्रमाणित गर्न असमर्थ हुनुहुनेछ।
सामग्रीको न्यून गुणवत्ता
मार्केटिंग स्वचालनले एक्लोसेसनमा काम गर्दैन। तपाईंले उच्च-गुणवत्ताको सामग्री उत्पादन गर्न आवश्यक छ जसले ग्राहकको संलग्नता बढाउँछ। यो याद गर्न लायक छ कि मार्केटिंग अटोमेसन सफल हुनका लागि, ग्राहक संलग्नता आवश्यक छ। यदि तपाईं नियमित आधारमा गुणवत्ता सामग्री सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण प्रयासहरू लगानी नगरी मार्केटिंग अटोमेसन लागू गर्नुहुन्छ भने, यसले पूर्ण विपत्ति निम्त्याउन सक्छ।
सामग्रीको महत्त्व बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ र नियमित आधारमा क्वालिटी सामग्री क्युरेट गर्नको लागि ध्वनि रणनीति छ।
प्लेटफर्म सुविधाहरूको उप-इष्टतम उपयोग
कम्पनीहरू मध्ये कि मार्केटिंग स्वचालन अपनाईएको छ, केवल १०% ले सफ्टवेयरको सबै सुविधाहरू प्रयोग गरेको छ। स्वचालन प्रयोगको अन्तिम उद्देश्य दोहोरिने कार्यहरूबाट मानवीय हस्तक्षेप हटाउनु हो। यद्यपि सफ्टवेयरको पूर्ण उपयोग गरीएन भने मार्केटिंग डिपार्टमेन्टको म्यानुअल काम कम हुँदैन। बरु, बजार प्रक्रिया र रिपोर्टिंग अझ बढी व्यस्त र बचाउन योग्य त्रुटिहरूको प्रवण हुनेछ।
जब तपाईं मार्केटिंग अटोमेशनलाई एकीकृत गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ, यो कुरा निश्चित गर्नुहोस् कि टिम सफ्टवेयरको सुविधाहरू प्रयोग गर्ने बृहत प्रशिक्षणको माध्यमबाट जान्छ। यदि विक्रेता प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्रदान गर्दैन भने, तब तपाइँको टीम सदस्यहरु सफ्टवेयर को संसाधन पोर्टल मा महत्वपूर्ण समय बिर्सनु पर्छ र उत्पाद को बारीकाहरु बुझ्नु पर्छ।
ईमेलमा अत्यधिक निर्भरता
मार्केटिंग स्वचालन ईमेल मार्केटिंगको स्वचालनको साथ सुरू भयो। यद्यपि यसको हालको फार्ममा सफ्टवेयरले लगभग सबै डिजिटल च्यानलहरू सामेल गरेको छ। मार्केटिंग अटोमेसन अपनाएको बावजुद, यदि तपाईं अझै मुख्य रूपमा लिडहरू उत्पादन गर्न ईमेलमा भरपर्दछ भने, यो समय मार्केटिंग रणनीतिमा पुनर्विचार गर्न समय हो। सामाजिक, खोज इन्जिनहरू र वेबसाइटहरू जस्ता अन्य मिडियाको उपयोग गर्नुहोस् ग्राहकहरूलाई उनीहरूको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न निर्बाध अनुभव प्रदान गर्न। ईमेलमा अत्यधिक निर्भरताले ग्राहकहरूलाई हदसम्म दु: खी गर्न सक्छ कि तिनीहरूले तपाईंको फर्मलाई घृणा गर्न थाल्छन्।
मार्केटिंग अटोमेसनमा लगानीमा अधिकतम वापसी प्राप्त गर्न, तपाईंले सबै च्यानलहरू एकीकृत गर्न र प्रत्येक च्यानलको सामर्थ्यलाई ग्राहकहरूमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक पर्दछ।
मार्केटिंग अटोमेसनलाई समय र पैसाको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण प्रारम्भिक लगानी आवश्यक पर्दछ। यो एक क्लिक सफ्टवेयर जादू हैन कि तपाइँको मार्केटिंग चुनौतिहरु लाई हल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए, तपाइँले आफ्नो मार्केटिंग स्वचालन उपकरण खरीद गर्न मन बनाउनु अघि, यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ हालको तालिकाबाट समय निकाल्नुहुन्छ यसलाई पूर्ण रूपमा प्रणालीमा एकीकृत गर्न।
यसका साथै तपाईको टोली सदस्यलाई नयाँ चीजहरू सिक्न र तपाईंको आवश्यकताको आधारमा समाधानहरू अनुकूलित गर्न प्रेरित गर्नुहोस्। केहि केसहरूमा तपाई विक्रेतालाई तपाईको विशेष आवश्यकता अनुसार एक विशेष प्रक्रिया अनुकूलन गर्न अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ। अन्तिम उद्देश्य दोहोर्याउने मार्केटिंग गतिविधिबाट मानव हस्तक्षेप हटाउन र खरीद जीवन चक्रलाई स्वचालित गर्नुपर्दछ।
टैग: स्वचालनजोगिनमार्केटिंग स्वचालनविपणन स्वचालन गल्तीहरूगल्ती
एन्थोनी मा एक परियोजना प्रबंधक हो प्रति घण्टा लेखकहरू जहाँ उसले बिभिन्न र निजीकृत रणनीतिहरू प्रयोग गर्दछ प्रभावी ढंगले आफ्नो ग्राहकहरूको व्यवसाय मार्केट गर्न। तपाइँको कागज लेख्न समय वा झुकावको अभाव छ? हाम्रो पेशेवर लेखन सेवा प्रयोग गरी हेर्नुहोस् र तपाईंको काँधबाट वजन घट्न दिनुहोस्! हामी तपाइँको लागि कामको सिंहको हिस्सा गरेर भ्रम र तनाव को घण्टा बचाउनेछौं।
डिसे 14, 2016 मा 9: 47 AM
धेरै रोचक लेख। मलाई खुशी छ कि तपाईंले मार्केटिङ स्वचालन सबै आकारका कम्पनीहरूका लागि हो भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ, किनभने यो सामान्य मिथक हो कि केवल ठूलाहरूले मात्र स्वचालन उपकरणहरूबाट लाभ उठाउन सक्छन्।
एन्थोनी बर्ग्स ✌ (@AnthonyBergs)
15 डिसेम्बर, 2016 बेलुका 5:33 बजे
मारिया, प्रतिक्रिया को लागी धन्यवाद।
तपाईं संग बिल्कुल सहमत। यो एक सामान्य मिथक हो कि "बस्ट" गर्नु पर्छ !!!
डिसे 28, 2016 मा 5: 31 AM
सुझावहरूको लागि धन्यवाद। म नयाँ वर्षमा मार्केटिङ स्वचालन प्रयास गर्ने योजनामा ​​छु र त्यहाँ सिक्न धेरै छ। तपाईं GetResponse जस्ता प्लेटफर्महरू बारे के सोच्नुहुन्छ? धेरै साना कम्पनीहरूको लागि समस्या मार्केटिङ स्वचालन सफ्टवेयरको लागि बजेट हो। त्यसपछि प्रशिक्षणको लागि आवश्यक समय आउँछ।
डिसे 31, 2016 मा 1: 17 AM
नमस्ते एडना, तपाईंले वास्तवमा मलाई मार्केटिङ स्वचालन प्लेटफर्मको तपाईंको चयनमा मेरा विचारहरू साझा गर्न उत्प्रेरित गर्नुभयो। GetResponse एक ठोस प्लेटफर्म हो - तर तपाइँ निश्चित हुन आवश्यक छ कि तपाइँ यसलाई कसरी प्रयोग गर्न जाँदै हुनुहुन्छ र तपाइँसँग पहिले नै स्रोतहरू छन्। मैले यी बारे लेखेको छु मार्केटिङ स्वचालन प्लेटफर्म खरिद गर्ने कारकहरू यहाँ।
जनवरी 24, 2017 मा 7: 21 एएम
महान पोस्ट, डगलस! मार्केटिङ स्वचालन प्लेटफर्म किन्न सोच्ने सबैका लागि पढ्नै पर्छ। आफ्नो अनुभव साझा गर्नुभएकोमा धन्यवाद।
जनवरी 24, 2017 मा 7: 19 एएम
एडना, तपाईंको प्रतिक्रियाको लागि धन्यवाद। मैले कहिल्यै GetResponse प्रयोग गरेको छैन, त्यसैले वास्तवमा, म केहि सुझाव दिन सक्दिन। साना कम्पनीहरूको लागि बजेटको समस्या छ, तर म निश्चित रूपमा भन्न सक्छु कि धेरै जसो केसहरूमा यसको लायक छ। प्रशिक्षणको प्रश्न पनि अवस्थित छ तर धेरैजसो उपकरण वा सफ्टवेयरहरूले तपाइँको लागि सेवा तपाइँको व्यवसायको आवश्यकता अनुरूप छ कि छैन भनेर निश्चित हुनको लागि नि:शुल्क परीक्षणहरू प्रस्ताव गर्दछ।